32 Responses to “ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း”
ကြိုက်တယ် .. အရင်တခါဖတ်တုန်းကလည်းကြိုက် .. ခုလည်းထပ်ဖတ် ကြိုက် ..း)) စိတ်ချမ်းသာလို့း)
ဒီပို့စ်ကို အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းပဲ ဖတ်ခဲ့ဖူးတာဆိုတော့ ခုလို ဘာသာပြန်ထားတာဖတ်ရတော့ ပိုလို့အရသာရှိပါတယ်။ ဘာသာပြန်ထားတာ သိပ်ကောင်းတာပဲရှင်..း)
အရမ်းကောင်းတဲ့ပိုစ့်လေးပါ ချစ်မကြီးရေ ..
ချောနှမ နောက်ဆုံးတော့ ညားကြလေသတည်းပေါ့
ကေသီက ကွာရှင်းခွင့်ကို တစ်လချိန်းလိုက်တော့ ဇာတ်ကို ကြိုတင်ရိပ်မိနေသလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် သူမရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုရောက်အောင် ကေသီ ဘယ်လို ဆွဲခေါ်မှာလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
ဘာသာပြန်ဆိုပေမယ့် မြန်မာလူမှု ဘ၀နဲ့ နီးစပ်လိုက်တာ။ မချောဖွင့်မပြောရင် တကယ် မြန်မာ ၀တ္ထုပါပဲ။
English လို ဖတ်ဖူးပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် ချောရဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ပြေပြစ်တဲ့ စကားလုံးတွေအောက်မှာ နစ်မျောသွားတယ်.. သိပ်ကောင်းတဲ့ စာစုလေးပါ...း)
ပြင်ပမှာလည်းအဲလို ဇာတ်သိမ်းနုိုင်ကြမယ်ဆုိုရင် စိတ်ချမ်းသာစရာဘဲချောရယ်။ တရှူးထိုးမဆုံးဖြတ်သင့်ဘူးလို့ အတွေးရစေပါတယ်။
တကယ်တမ်းအဲလိုကြုံတွေ့လာရင် ကေသီလိုတည်ငြိမ်အောင် ကြိုးစားနိုင်ပါ့မလား ကိုယ့်ကိုကိုယ်စိုးရိမ်မိတယ်....
အဲလိုနေခဲ့လို့လုံးဝ ပြတ်သားနေတဲ့ ယောက်ျားကို အနိုင်ရခဲ့တာပေါ့....
ဒါပေမဲ့ယောက်ျားတွေက ခါသီးစရာကောင်းတယ်နော်...ဒီလောက်ချစ်ခဲ့တဲ့..မိန်းမကိုတောင် လုပ်ရက်တယ်..ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူး..တကယ်ဆို ဘယ်လောက်ပဲအေးစက်နေပါစေ မိန်းမနဲ့သားလေးရဲ့မျက်နှာကို မလုပ်ခင်ကတည်းကစဉ်းစားသင့်တယ်...ခုတော့မိန်းမနှစ်ယောက်ကို ဝမ်းနည်းအောင် လုပ်မိပြီပေါ့...
ဒီဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြီး အမျိုးသားတွေရော အမျိုးသမီးတွေပါ နမူနာယူနိုင်ကြပါစေ..မချောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ဘာသာပြန်တာ စကားလုံးရွေးတာတွေ သိပ်လှတာပဲ။
ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း နဲ့
ဖတ်တော့ ဖတ်ဖူးသလိုလိုပဲ ခံစားလိုက်ရတယ် ..
ခု ပြန်ပြီး ထပ်ဖတ်တော့လည်း
ဖတ်လို့ ကောင်းနေတယ် ..
I have read this translated short story in one of the Burmese Magazine. All the words and scripts are same but the ending in this blog is different. The original "The Divorce" story and translated story ending is the wife suffered cancer but she didn't tell her husband ... and finally she was die on her bed holding her love note in her hand.
If I find this magazine at home, I can tell the name of the Magazine and author also the tittle of the story in Burmese. I am sorry to write my comment here.
တောင်းဆိုတာ ဘယ်သူတုန်းဟင်........ တိုက်ဆိုင်မှုများ ရှိနေလို့ လား။ ဟီး :D :D :D
၁၀နှစ် ဆိုတဲ့ သံယောဇဉ်က နည်းတာမှ မဟုတ်တာလေ...
ဒီဝတ္ထုတိုလေး ဖတ်ပြီး တစ်ခုခု ရလိုက်သလို ခံစားရတယ်။ မျှဝေပေးတဲ့ မချောကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ဖတ်ပြီးသားပေမယ့် အစအဆုံး ပြန်ဖတ်မိသွားတယ်..။
အလားတူအမြင်မှန်ရသွားတဲ့ ယောကျာ်းလုပ်သူကိုလည်း ချီးကျူးချင်တယ်။မဟုတ်ရင် သားလေးက ကြားက မြေစာပင်ဖြစ်ရရှာမှာ...။
ပန်းစည်းလေး ကေသီရရင် ဘယ်လောက် ကြည်နူးဝမ်းသာသွားမယ်ဆိုတာ မျက်လုံးထဲ တွေးမြင်လိုက်မိတယ်..။
ခုလို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စာလာဖတ်ပြီး ကော်မန့်ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ.
မအိအိပြောတဲ့ မဂ္ဂဇင်းကဝတ္ထုတိုလေးကို ကျွန်မလည်း ဖတ်ဖူးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ မအိအိပြောသလိုဘဲ ကင်ဆာနဲ့ ဆုံးတာပါ.။ ကိုယ်တိုင်ရေး မဟုတ်တဲ့ ဘာသာပြန်ဖြစ်လေတော့ ဘယ်သူမဆို ပြန်ရေးနိုင်တာမို့ ဇာတ်လမ်းက တူနေနိုင်ပါတယ်။
နောက် ဒီဝတ္ထုရဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုတစ်ပုဒ်မှာလည်း ကင်ဆာနဲ့ ဆုံးသွားတာရော၊ ခုလို happy ending နဲ့ ဆုံးတာရော ၂ပုဒ်လုံးကို အင်တာနက်ကနေ ဖတ်ရပါတယ်ရှင်.. အဲဒီအခါမှာ ဘယ်အပုဒ်ကို ဘာသာပြန်မလဲလို့ ကျွန်မရွေးချယ်တဲ့အခါအမှာစာဖတ်တဲ့သူတွေကို ပျော်စရာဇာတ်သိမ်းလေး ပေးချင်တာကြောင့် ဒီတစ်ပုဒ်ကို ရွေးချယ်ဖြစ်တာပါ။
လာဖတ်သူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အနည်ငယ်မျှလောက်ဖြစ်ဖြစ် ပျော်ရွှင်သွားတယ်ဆိုရင်လည်း ဒီဝတ္ထုလေး ဘာသာပြန်ကျိုးနပ်တယ်လို့ ထင်တာပါဘဲရှင်.ခြေလှမ်းပျက်နေတဲ့ ယောက်ျားတွေဖတ်မိရင်လည်း မိမိရဲ့ ဇနီးမယားကို ပြန်လည်ဂရုစိုက်ဖိုပ အသိလေးဝင်လာမယ်ဆိုရင်လည်း ဒီဝတ္ထုလေးက ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ကို ရလိုက်တယ်လို့ ရေးသူအနေနဲ့ ပျော်ရွှင်ရတာပေါ့နော်.. ဒီဝတ္ထုလေးကို ပထမအကြိမ် တင်ခဲ့တုန်းကလည်း ကျွန်မအတွက် ကျေနပ်ပီတိရခဲ့ပါတယ်.. ဒီဝတ္ထုလေးကြောင့် ကွာရှင်းခါနီး လင်မယားတစ်စုံတို့ဟာ မကွာရှင်းဖြစ်တော့ဘဲ ပြန်လည် ချစ်ခင် သင့်မြတ်သွားကြတယ်လို့ သိရတာကြောင့် မျက်ရည်လည်မိအောင်ကို ကျေနပ်ပီတိဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။
မအိအိအနေနဲ့ နောက်လဲ ဝေဖန်အကြံပြုဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်.. ကျေးဇူးလဲ အများကြီးတင်ပါနော်..
ချစ်သော မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးပါ ဗျို့.. :P :P
၂ ထပ်ရှိတော့ မှတ်မိ၏ ။ ဇာတ်လမ်းဆုံးခါနီးမှ သိတော့၏ ။ ( ဦးနှောက်ကောင်းလိုက်ပုံများးး )
၂ ပြန်ကြော် အချစ် ၊ ၂ ထပ်ကွမ်း အချစ်မျိုးလေးနဲ့ ဒီလင် ဒီမယား ဒီသားသမီးများ ချစ်ခင်ပျော်ရွှင်နေနိုင်ကြရင် လောကကြီးဟာ အင်မတန် သာယာနေကြမှာပဲ မချောရေ ..
ဒါပေမဲ့ လှေနံ ၂ ဖက်နင်းတတ်တဲ့ ယောကျာင်္းတွေကိုတော့ သတ်ချင်တယ် .. ဟဲ ဟဲ ...
'ကျွန်မရွေးချယ်တဲ့အခါအမှာ စာဖတ်တဲ့သူတွေကို ပျော်စရာ ဇာတ်သိမ်းလေး ပေးချင်တာကြောင့် ဒီတစ်ပုဒ်ကို ရွေးချယ်ဖြစ်တာပါ' ဆိုတာနဲ့တင် လုံလောက်ပါပြီ ချောရေ။ အဆုံးသတ်မှာ ဂျူလီနောက်လိုက်သွားမယ်ဆိုရင် မတရားဘူးပေါ့နော်း)
အင်း အိမ်ထောင်သည်ဘ၀မှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို နားလည်မှု၊ စာနာမှုတွေနဲ့ ထုံမွှမ်းထားတာပဲလေ...အပေါ်ယံ အချစ်က သူ့ကို ဘယ်ယှဉ်နိုင်မလဲ...
ဆရာမ- ချော- ခင်ဗျား
ဆရာမရဲ့ ယခုဘာသာပြန်ဝတ္ထုကို MOBAဆိုက်မှာဖတ်လိုက်ရလို့ စာမူအသုံးပြုခွင့်တောင်းတဲ့စာကို အဲဒီဆိုက်က ကွန်မင့်ထဲမှာပဲ ရေးထားခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးရက်ကပါ။ ဆရာမ မဖတ်ဖြစ်သေးဘူးထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာမဆိုက်ကို ရှာပြီး အဲဒီစာကိုပဲ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ရေးပို့လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဖတ်ကြည့်ပြီး အကြောင်းပြန်ပေးစေလိုပါတယ် ဆရာမ။
-ဆရာမ ချော-- -ခင်ဗျား
လူကြီးမင်းရဲ့ -အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်-- ၀က်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားတဲ့
ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း (ဘာသာပြန်ဝတ္ထုတို)--- ကို နှစ်သက်တဲ့အတွက်
ဖတ်ရတာကောင်းလွန်းလို့ဘယ်လိုပြောရမှန်းကိုမသိအောင်ပါဘဲ ...မချောရယ်......အရမ်းကောင်းတဲ့ ၀တ္တုတိုလေးပဲနော်.....ကျေးဇူးပါ အရမ်းကောင်းပါတယ်...နောက်လည်းဒီလိုလေးတွေရှီရင် တင်ပေးပါဦးနော်...မကြီးချောရေ....ကြိုက်လွန်းလို့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကိုလည်း ရှယ်လိုက်ပြီနော်.....
Soe Thura said...
The ending might be the way it should be but does anyone ever think about Julie who becameavillain for this love story. She was such an innocent girl, she just want to be with someone she loves. And no one thinks for her.
He isaguy who didanormal guy couldn't do normally.
And Kathy is not wrong to get her husband back.
But what about Julie? All the things she did was wrong? Maybe she lovedawrong person in wrong timing, that is all. She didn't do anything wrong. It was justawrong timing.
Plus regarding to the feelings, no one is wrong. The way they respond to the feelings say it is wrong or right.
I hope everyone meets their right one on the right time.